စနေနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ ခုနှစ်) – ဗေဒင်သုတ
စနေနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ ခုနှစ်)
June 23, 2021 smt	View : 3902
မြန်မာနှစ်သစ် ၁၃၈၃ ခုနှစ်အတွင်း မှာ စနေနေ့ဖွား များစွာအတွက် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် ကံဇာတာအသီးသီးကို အမည်များနှင့်တစ်ကွ …တစ်ဆင့်ချင်း ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
၁၃၈၃ခုနှစ်အတွင်း .. စနေနေ့ဖွားအများစုအဖို့ …ဖိအားတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်လာရဖို့ ရှိပါတယ်။ အချို့သောဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် စနေနေ့ဖွားများအဖို့ အထက်လူကြီးနဲ့ အောက်လက်ငယ်သားကြား အခက်အခဲကြုံလာရတတ်ပါတယ်။ ဒီတစ်နှစ်သည် အခက်အခဲများတတ်သောကာလ ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အစစအားလုံး ညံ့မှာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။
နေရာထိုင်ခင်းကဏ္ဍအပိုင်းမှာတော့ စနေနေ့ဖွားများ အားသာချက် ရရှိတတ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း ဆောက်လုပ်လိုသူများ၊ ၀ယ်ယူလိုသူများ၊ နေရာသစ်အခြေချလိုသူများ စိတ်ဆန္ဒ ပြည့်ဝရတတ်သော ကာလမျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့ မူလဇာတာအနေအထားနဲ့ မိမိတို့ အသက်ပိုင်းခြားများအရ …ကိုက်ညီနေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့အတွက်တော့ နေရာထိုင်ခင်း ဆိုင်ရာ လိုလားဆန္ဒမုချပြည့်ဝလာနိုင်ချိန်ပါပဲ။
ထို့အတူ အချို့သော ၀န်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ စနေနေ့ဖွားများအဖို့လည်း မိမိတို့ လိုလားနှစ်သက်သော ဌာနဆိုင်ရာပိုင်း ရာထူးဌာနမျိုး စသည်ဖြင့် ရရှိတတ်ကြချိန်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ အင်္ဂါနံဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော ( ဥပမာအားဖြင့် … တင်မိုးဆွေ၊ မာလာစိုး၊ ကျော်စိန်၊ နိုင်အောင်ဇော် ..စသည်ဖြင့်သော ) စနေနေ့ဖွားများအဖို့ ..နေရာကောင်းရခြင်း၊ ကောင်းသောအထောက်အပံ့အချို့ရရှိတတ်ခြင်း၊ မိမိ၏ ညီ၊ ညီမ၊ မောင်နှမ များမှ ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှု ကြုံရတတ်ခြင်း ကံလေးတွေနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်နိုင်ချိန် လို့ ဆိုရမှာပါ။
မေတ္တာရေးကံအပိုင်းမှာတော့ စနေနေ့ဖွားတွေအဖို့ ဗျာများရခြင်း၊ စိတ်ဒွိဟဖြစ်စရာအခြေအနေများ၊ လျှို့ဝှက်အပ်သည့် အနေအထားများ ကြုံလွယ်တတ်ချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း စနေကျားကျား တို့အဖို့ နဂိုမူလဇာတာကလည်း အခံလေးပါနေမယ်ဆိုရင် … တိတ်တိတ်ကလေး ၀င်လာတတ်တဲ့ …ချစ်မှုရေးရာကဏ္ဍမျိုးကို ဂရုစိုက်ရှောင်ရှားရမယ့် ကိန်းပါပဲ။ အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ကြာသာပတေးနံဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားမိသော ( ဥပမာအားဖြင့် ..တင်တင်မြင့်၊ ထွန်းမင်း၊ မျိုးလင်းဖြိုး၊ နိုင်လင်းမြတ်…စသော) စနေနေ့ဖွားမျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၁၃၈၃ခုနှစ်သည် …စိတ်ဒွိဟများရမယ့် နှစ်တစ်နှစ် မုချ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရှေးယခင်က ဘယ်လောက်ပဲ ပြတ်သားသူမျိုး ဖြစ်နေပါစေဦး၊ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ အရာရာက ကိုယ့်အတွက် ရွေးရခက်မယ့်လမ်းတွေ …choice လုပ်ရ ခက်ခဲတာတွေ ကြုံလာပါမယ်။
စနေနေ့ဖွားတွေအဖို့ ဒီတစ်နှစ်မှာ မင်းအစိုးရတွေနဲ့ အတိုက်အခံသဖွယ် အလွန် ဖြစ်လွယ်တတ်ချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားကြီးသော မင်းအစိုးရများ၊ သို့မဟုတ် မိမိ၏ အထက်လူကြီးများ၊ အမျိုးသားအကြီးအကဲများ( အဖေ၊ အဖိုး၊ အစ်ကိုကြီး၊ ဦးလေးဦးမင်း.၊ ဆရာသမား၊ စီနီယာအကြီးအကဲ စသည်ဖြင့်…..) နဲ့လည်း ထိပ်တိုက်ပဋိပက္ခလေးတွေ မကင်းရတတ်ချိန်ပါ။
အထူးသဖြင့် စနေနေ့ဖွား ဖြစ်နေပြီး…အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ တနင်္ဂနွေနံ ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော ( ဥပမာ…တင်နီလာအောင်၊ ထွန်းထွန်းအောင်၊ မြင့်အေး၊ သန်းဦး..) စသည်ဖြင့်သော စနေနေ့ဖွားများ ဖြစ်ရင် ပိုမိုပြီး ရန်တွေ အားပြိုင်မှုတွေ ….များပြားလာမယ့် နှစ်ပါပဲ။
စနေနေ့ဖွားတွေအဖို့ ယခုနှစ်ထဲမှာ …. (ပြီးခဲ့သော နှစ်တွေ ကာလတွေတုန်းက …အမှားအယွင်း အချို့ကို) ပြန်လည် ပြုပြင်ရတတ်သည့် အချိန်ကာလမျိုး လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ….မိမိတို့အတွက်မဖြစ်မနေ အရေးပါသော ပြုပြင်ပြောင်းလည်းမှုတွေကို လုပ်ကိုင်လာရတတ်ပါတယ်။ အခက်အခဲများ ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပေမယ့် ထိုပြောင်းလည်းမှုတွေသည် အောင်မြင်မှု ရတတ်ချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနံ (ယ၊လ၊၀) ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသည့် …နိုင်ဝင်း၊ တင်နီလာဝေ၊ တိုးသူဇာလင်း …အေးမြတ်ဝင်း ..စသည်ဖြင့်မှည့်ခေါ်ထားမိသော စနေနေ့ဖွားများအဖို့ …မဖြစ်မနေ ပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့လာရသည့် ….အပြောင်းအလဲတွေကို အခက်အခဲကြားကနေ အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလည်းနိုင်ခွင့် ရလာတတ်ပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရှင်းရှင်းတွေးမိသလိုရေးရမယ်ဆိုရင်တော့.၁၃၈၃ခုနှစ်သည် စနေနေ့ဖွားများအတွက် အခက်အခဲနဲ့ သည်းခံရမှုတွေ၊ အနစ်နာခံပေးရတာတွေ မကင်းနိုင်သည့် ကာလတစ်ခုပါ။ အသက်မွေးမှု နယ်ပယ်မှာ အတိုက်အခံနဲ့ အားပြိုင်မှုတွေလည်း သိပ်များလာမယ့် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
စနေနေ့ဖွားတို့အဖို့ ၁၃၈၃ခုနှစ် အတွင်းမှာ မမျှော်လင့်ထားသည့် နေရာကနေပြီး ကောင်းကျိုးလည်း ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသေးတယ်။ အများအားဖြင့် မြောက်အရပ်မှ လာဘ်ဝင်ခြင်း၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်း သို့မဟုတ် …မထင်မှတ်ထားသော လာဘ်၊ အမွှေးနံ့သာ၊ ပရိဘောဂ၊ အဖိုးထိုက်သော အသုံးအဆောင် စသည်ဖြင့် ရုတ်တရက် လက်ခံရရှိတတ်ချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်…….စနေနေ့ဖွား ဖြစ်နေပြီး အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သောကြာနံဖြင့် ….တင်သိန်း၊ တိုးဝေသွင်၊ ထက်ထက်သူ၊ ထင်ရှားဟိန်း…..စသည်ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော သူတွေအဖို့.မရွယ်ဘဲနဲ့ စော်ကဲမင်းဖြစ်သည့်နှယ်….(အများစု သော စနေတွေ ကံညံ့နေတတ်ကြသည့် နှစ်မျိုး ဖြစ်လင့်ကစား) ….ကြိုကြားဆိုသလို ကံကောင်းမှုလေးတွေ ကြုံလာကြရတတ်ပါတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ မန်နေဂျာရာထူးရသွားတာ၊ မထင်မှတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ရမည့် နေရာမျိုး ရသွားတာမျိုးကို ( မိမိတို့မူလဇာတာနဲ့ အသက်ပိုင်းအရ ကံတွေပါ ညီညွတ်နေခဲ့မယ့်ဆိုရင်) အဆိုးထဲကနေ အကောင်းတွေ မျှော်လင့်ခွင့် ရလာတတ်ကြပါတယ်။ စနေနေ့ဖွားများအဖို့ ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာ အဝေးက နေ လက်ဆောင်တစ်ခုခုဝင်လာမယ် ဆိုရင် ကံကောင်းမှုကို မျှော်လင့်နိုင်ကြပါပြီ။
အထူးသဖြင့် စနေနေ့ဖွား ဖြစ်ပြီး အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ တနင်္လာနံ တစ်ခုခုဖြင့် ….တင်နီလာကျော်၊ ထက်မင်းခိုင်၊ တိုးမြင့်ကို၊ ထူးသဇင်ခက် ..စသည်ဖြင့် မှည့်ထားမိသူတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ယင်းကံသည် ပိုမို နီးစပ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
စနေနေ့ဖွားတွေသည် ၁၃၈၃ခုနှစ်ထဲမှာ အိမ်နီးနားချင်း၊ အလုပ်ထဲမှ နီးစပ်သူ၊ ခြံနီးနားခြင်း၊ စသည်ဖြင့် နီးစပ်ဆက်နွယ်နေသူအချို့နဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ကြုံလာရတတ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် …အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ရာဟုနံ (ရ) ဖြင့် ….. တင်ရွှေ၊ ထူးသစ်ရဲ၊ သူဇာရှင်း၊ သင်းမြရွှေရုံ….စသည်ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားမိသူတွေမှာ ဒီအချက်သည် ပိုမိုထင်ရှားစွာ ကြုံလာရတတ်ပါတယ်။
စနေနေ့ဖွားတွေ အတွက် ယခုနှစ် ၁၃၈၃ခုနှစ်သည် ….. တာဝန်…တာဝန်…တာဝန်ဆိုတာတွေ ဒင်းကြမ်းထပ်နေမယ့်ကာလ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရရ မရရ အခမဲ့အကျိုးဆောင်ပေးရတာတွေ ဗုံးဘောလအောကိုပဲ အောတိုက် ၀င်လာနေမယ့် နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးကြဖို့သာတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ ထိုသို့လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်ကလည်း မိမိတို့ရဲ့ ကံပိုင်းဆိုင်ရာတွေ မသိမသာကနေ သိသိသာသာအထိ မုချ ပြောင်းလည်းမြင့်တက်လာနိုင်မယ့် ကောဇာခုနှစ်မျိုးမို့ပါပဲ။
အတ္တကိုသိပ်ပြီး ရှေ့တန်းတင်နေမိဦးမယ့် စနေနေ့ဖွားတွေ အတွက်ကတော့ ….၁၃၈၃ခုနှစ်သည် ငါးဖယ်တေသလို တေမယ့် နှစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ပြောသမျှ ရေးသမျှလည်း မယုံကြည်ပါနဲ့။ လက်တွေ့သာ ရှုစားကြည့်ကြပါစို့ခင်ဗျား။ အထူးသဖြင့် အမည်ရဲ့ နောက်ဆုံးကို စနေနံ …ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားမိသော၊ မြင့်ထွေး၊ သိန်းထွန်း၊ တင်တင်၊ နီနီ၊ ထွေးထွေး …တိုးသဇင်ထိုက်…စသည်ဖြင့် အမည်ရှင်တွေ အဖို့……အများအကျိုးကို နိုင်သလောက်ဆောင်ကျဉ်းမှသာ ….၁၃၈၃ခုနှစ်သည် ကံကောင်းမှုဆိုတာလေးကို မျှော်လင့်နိုင်ကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ….နဲနဲ အနှစ်ချုပ်ကြပါစို့။ ဒီတစ်နှစ် စနေနေ့ဖွားတွေအားလုံးအတွက် …..
(၁) အသက်မွေးမှုအပိုင်းမှာ.အတိုက်အခံတွေ၊ အားပြိုင်မှုတွေ၊ ရန်သူတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေပါမယ်။ မိမိလိုလားသည့် အကျိုးစီးပွားကို ….တိုက်ယူ….လုယူမှ ရမယ့် ကာလမျိုးလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ မင်းအစိုးရပိုင်းတွေ နဲ့ အတိုက်အခံအရမ်းမများအောင်ဂရုစိုက်ပါ။ မင်းဘေးရန်စွယ်…တစ်နည်းအားဖြင့် မင်းပြစ်သင့်လွယ်သော ကာလ သည် ယခုနှစ် ၁၃၈၃ခုနှစ် မို့ပါပဲ။
(၂) အိမ်ထောင်ရေး၊ မေတ္တာရေးအပိုင်းမှာ….ဗျာများရလွယ်ချိန်ပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေ (အမျိုးသမီးတွေလည်း ကြုံနိုင်..သို့သော် အများစုက အမျိုးသားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။) လျှို့ဝှက်အပ်သော ချစ်မှုရေးရာ ကြုံလွယ်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကျန်းမာရေး….ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော၊ အရိုးအဆစ်၊ နှလုံး ၊ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်း၊ ဆိုင်ရာ ဥပါဒ် ပေးလွယ်ချိန်ဖြစ်ပြီး…အင်အားအများဆုံးကတော့ အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှု ကြုံလွယ်ချိန်ပါ။ အချို့သော စနေများ သည်းခြေ ပြဿနာကြုံလွယ်ပါလိမ့်မယ်။
(၄) လူမှုရေး … စကားအခြေအတင် ပြောရသည့် ကံတရားသည် သည်တစ်နှစ်အဖို့ ပြေးမလွတ်သာသည့် ကံအစိတ်ပိုင်းလို့ကို ဆိုရမလိုပါပဲ။ ထိပ်တိုက်ဖြေရှင်းဆွေးနွေး ညှိယူရတာတွေ ပါလာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်နီးနားချင်းတွေ၊ အခန်းနီးနားချင်းတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာနီးစပ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာ အထူးသတိထားရမယ့်အချိန်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာ ပိုမိုသတိထားပါ။
အနှစ်ချုပ်အကြံပြုလိုခြင်း – ကဲ ..စာသံပေသံဖျောက်ပါရစေ။ ရေးရတာ ပင်ပန်းလို့။ ဒီနှစ်ကတော့ စနေတွေ မလွီ။ ပင်ပန်းမယ်။ သီးခံရမယ်။ အနစ်နာခံရမယ်။ ရန်သူတွေကလည်း များဦးမယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးတွေကလည်း လုပ်ရဦးမယ်။ ကောင်းတာတွေ ပြန်မျှော်လင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နေရာပေးခံရမယ်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ နေရာလေးတွေ ရလွယ်လာမယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း …မမျှော်လင့်ဘဲ ရလာတတ်တဲ့ …..အကျိုးစီးပွားလေးတွေ လာနိုင်တယ်။
အထူးသဖြင့် အဝေးကလာတဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုခုဟာ မိမိရဲ့ ကံဇာတာကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ …..(ဟဲ့ကောင်မရေ…ငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးစမ်းပါ၊ ဟကောင်ကြီး …သားကြီး…..ငါ့ကို မချစ်ရင်တောင် လက်ဆောင်လေးတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပို့စမ်းပါဟ လို့ …ကြိတ်ပြောရမလားတောင် မသိ။ )
ယုံတာ မယုံတာ အပထား….အဆင်ပြေစေချင်တဲ့ စေတနာ ရှေးရှုပြီး ဒီစာစုကို ဒီလောက်ထိ ရှည်ဝေးအောင် ကြိုးစားပေးလိုက်ရပါတယ်။ နှစ်စဉ် စနေတွေ အတွက်ဆို နောက်ဆုံးမှလည်း ရေးပေးနိုင်၊ (တစ်ချို့နှစ်တွေဆို ရေးကို မရေးပေးနိုင်တော့သည့်အတွက်လည်း) ….စနေတွေအတွက် ….ဒီလောက်ထိ ကြိုးစားရေးသားပေးလိုက်ရပါကြောင်း။
အားလုံးသော စာဖတ်သူများ နှင့်တစ်ကွ စနေနေ့ဖွားအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဘေးဘယာ ဝေးကွာနိုင်ကြသည် ဖြစ်ကြပါစေ။
လေးစားစွာဖြင့် – ဆရာစိုးမိုးထွန်း (ခေါ်) ဆရာဝေသာလီမောင်ဖုန်း – 09 789 333 791
← တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားတို့ ကံဇာတာ (၁၃၈၃ခုနှစ်)
နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာညိုးမှိန်တတ်သော နှစ်များ →
ထီကံ အကောင်းဆုံး ရာသီခွင်များ (98,539 views)
မြန်မာဗေဒင်ထဲက ဘုမ္မိစက်ကွင်းအကြောင်း (63,680 views)
ဘုရားပန်းအိုးတွေ လဲတဲ့အခါ… (49,344 views)
မွေးရက်ဂဏန်းနဲ့ မိတ်ဖက်ဂဏန်းများ (48,782 views)
ဒီနှစ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ငွေဝင်၊ ထီပေါက် ကံကောင်းမယ့်သူများ (44,663 views)